I-oval itafula elishayela ekhishini
Itafula elithwalayo ekhishini liyisimo se-oval - isithandwa esidumile ekamelweni elincane. Isici salo ukuthi i-folds kalula, ithatha ubuncane besikhala ekamelweni bese idiliza itafula eligcwele lokudlela.
Inzuzo yesimo se-oval sephezulu setafula ukungafiki okuphelele kwezingxenyeni, okuqinisekisa ukuphepha nokuklama, ngoba imodeli enjalo ibukeka ibe nenhle futhi inhle kakhulu. Ivulekile kakhulu kunetafula eliyindilinga , kodwa libukeka libonakala kahle.
Ithebula elincane le-oval - okwenzayo kanye nobuhle
Ithebula le-oval yokudlela ekhishini lingakhuliswa ithebhu, elitholakala ngaphansi kwe-countertop. Kwamanye amamodeli, izakhi ezengeziwe zithuthukile ngenxa yezingxenye ezisekelayo ezisekelayo.
Ithebula le-glass oval eliyindilinga ekhishini libukeka lihle kakhulu, ithebula elibala elibonakalayo libukeka likhulisa igumbi, linikeze ukukhanya nokuphefumula. Imilenze yensimbi ivame ukusetshenziswa njengemilenze. Ingilazi enesibindi ayesabi ukwanda kwamanzi, ukushaqeka komshini nokushisa.
Ithebula le-oval elinezinkuni elinezinkuni - eyintandokazi yekhishi elingaphakathi. Ukuze kusetshenziswe izinhlobo ezahlukene zezinkuni - i-oki, i-pin, i-walnut, i-cherry, i-beech, umlotha. Ukukhetha ubuso obumnyama, be-lacquered noma matte, ungakwazi ukuklama noma yimuphi umklamo. Amathebula ezenziwe ngezinkuni zemvelo abukeka kahle. Uma inketho enjalo ingamukeleki ngenxa yentengo, ezinye izindlela ezivela ku-chipboard noma i-MDF zamukele izindleko ezamukelekayo nokubukeka okumangalisayo.
I-oval sliding table table ingama emlenzeni owodwa noma emasimini amaningana aqoshiwe, ngenxa yokuthi izobukeka ibheke nakakhulu.
Ukuklama ngomlenze owodwa kufanele ukufaka ekamelweni elincane, ukusekelwa okunjalo ngeke kukuvimbele ukuba uhlezi phansi futhi ukhuphuke etafuleni.
I-white oval sliding table table ibukeka ngokukhethekile kakhulu. Ekamelweni elincane kuzokuvumela ukuba ushayele imingcele yesikhala futhi wenze kube lula futhi kuvuleke, futhi ekamelweni elikhulu - kuzongeza ukunethezeka ngaphakathi.
Ithebula elincane le-oval ekhishini lidala isimo sobumpofu nokufudumala. Ivumela nganoma yisiphi isikhathi ukwandisa indawo ye-countertop ubukhulu obukhulu futhi uhlele ukudla okunobungane, okuzoletha ndawonye umndeni wonke futhi kuzofaka isandla ekuvumelaneni kwesimo endlini.
Isitayela se-eclecticism ngaphakathi
Indlu enesitayela se-Provence
Ukwakhiwa kwamakamelo okulala ngamandla
Iziphequluli zezinkuni zekhishi
Okumnyama kudwebe phansi
Drywall noma plaster - okungcono?
Izindlu ze-Art Nouveau
Ukubhekana nendlu ngetshe lemvelo
Ithebula lokudlela elizungezile
Ungasusa kanjani uthando lomuntu?
I-Tori Spelling ishintshe kakhulu umbala wezinwele
Ukuthembela kwengqondo ekudleni
I-Stil Bohos chic
Amafutha we-Vaseline - sebenzisa ukuqotshwa
Ifenisha yasehlobo ephuma esihlahleni
U-Puff Daddy waguqula igama lakhe ngokuthi Uthando
Ukudansa kwaseMpumalanga kwabaqalayo
I-Caesarea National Park
Isitayela sempi 2015-2016
Indlela yokuqeqesha kahle?
Izimpawu zowesifazane ongeyena wesifazane
Kunokwelapha inhlanhla inja?
Yini okufanele ugqoke amabhuzu amnyama we-suede?
Inoculation of apula nge isibambo ngo-Agasti
I-Nepal - i-rafting
Indlela yokuvuna kahle imbewu yezitamatisi zezithombo?